स्याङयोङ नयाँ वर्ष २०७५ अफर
Posted: 2018-04-13 19:55:08
काठमाडौं– स्याङ्योङ मोटर्स नेपालको लागि आधिकारिक बिक्रेता आई.एम.एस्. ग्रुपले नयाँ वर्ष २०७५ लाई लक्षित गरी ‘नयाँ वर्ष २०७५ अफर’ बजारमा ल्याएको छ । नयाँ वर्ष २०७५ को सन्दर्भमा ल्याएको विशेष अफरमा नगद ४ लाख सम्म छूट र हातखाली नहुने उपहारमा सामसुङ ग्यालेक्सी एस् ९ प्लस रेक्स्टन वा कोराण्डो गाडी खरिद कर्ताले प्राप्त गर्ने छन् भने सामसुङ ग्यालेक्सी एस्. ९ टिभोली, लक्स वा एक्टोन स्पोर्टस् गाडी खरीद कर्ताले प्राप्त गर्ने कम्पनिले जनाएको छ ।
यसबाहेक कोरियन लक्जरी आरामदायी गाडी खरीदकर्तालाई स्याङ्योङले जुनसुकै ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न सकिने, सरल फाइनान्स सुविधा, एक आ.व. को लागि सडक कर छूट ३ वर्षे वा ६०,००० किमी वारेन्टी सुविधा , ३ वर्षे फ्रि सर्भिसिङ्ग र हरेक टेस्ट ड्राइभमा आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर लगायतको सुविधा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो नयाँ वर्ष अफर ३० चैत २०७४ देखि १७ बैशाख २०७५ सम्म लागू हुने वताइएको छ ।